ကပျပါပေ့ ပီကရေယျ: မချစ်တတ်သေးပါ
အချစ်အကြောင်း ပြောပြဖို့ မေပျို က တက် (TAG) ထားတယ်လေ။ သူ့အကိုရဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေ ကြားချင်ပုံ ရတယ်။ ဒါပေမယ့် စိတ်မကောင်းပါဘူး သဲရယ်။ အချစ်အကြောင်း ရေးမယ်လို့ အပီအပြင် အားတင်းပြီး ညစ်ထုတ် ကြိုးစားပေမယ့်လည်း တစ်လုံးမှ ထွက်မလာဘူးလေ။ သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်က အကို့ကို "Intellectual Robot" လို့ သမုတ်ဖူးတယ်။ အသိတရား ရှိတဲ့ စက်ရုပ်ပေါ့။ လူလို ကောင်းကောင်း မခံစား တတ်ဘူးတဲ့လေ။ ၅ တန်းကတည်းက ခင်လာတဲ့ သူငယ်ချင်းဆိုတော့ သူပြောတဲ့ စကားကို ငြင်းဖို့ အတော် ခက်နေတယ်။ ဒါပေမယ့် ဟုတ်ပါတယ်လို့ ၀န်မခံခဲ့ဘူး။ ငါ ခံစားတတ်ပါတယ် လို့ပဲ ယုံကြည်ခဲ့တာလေ။ သူပြောတဲ့ စကားကို အတော်ကြာကြာ စဉ်းစားကြည့်မှ အတော်လေး မှန်နေတယ်။ ခံစားမှု အပိုင်းမှာ အတော်လေး အားနည်းနေတယ်။ `There is something beyond reasoning ´ တဲ့။ ဆင်ခြင်မှု နယ်မြေရဲ့ အပြင်မှာ အရာတချို့ ရှိတယ်တဲ့လေ။ ဒါကို အရင်က လက်မခံနိုင်ခဲ့ဘူး။ Just feel it !! ဆိုတာကိုလည်း သိပ် ဘ၀င် မကျဘူး။ ဘယ်အရာ မဆို မှားခြင်းနဲ့ မှန်ခြင်းကို ဝေဖန် ဆုံးဖြတ်နိုင်မှ ဘ၀ကြီးမှာ နေပျော်မယ်လို့ ထင်တာလေ။ ခံစားကြည့်ရုံနဲ့ အားလုံးဟာ စိုပြေနေမှာလား။ ဒီလို အတွေးတွေနဲ့ အကို့မှာ ချစ်ဖို့တောင် စဉ်းစားနေရတယ်လေ။
ငယ်ငယ်က တွေးတဲ့ အတွေးလေးတစ်ခု ရှိတယ်။ မှန်လား မမှန်လား စဉ်းစားသာ ကြည့်တော့လေ။ လောကမှာ ရှိတဲ့ သက်ရှိ သတ္တ၀ါတွေ အားလုံးက ခံစားချက် ဆိုတာကို အနည်းနဲ့ အများ နားလည်ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် လူဆိုတဲ့ သတ္တ၀ါကမှ စဉ်းစား ဆင်ခြင်တတ်တဲ့ အသိတရားနဲ့ နေတတ်ကြတာ။ ဒီလိုလေး တွေးပြီး ယုံကြည်ထားမိတော့ ဆင်ခြင်တတ်ဖို့က နံပါတ်တစ် ဖြစ်နေခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ခံစားမှုတွေရဲ့ ထိုးနှက်ချက်တွေကို ခံလာရတဲ့အခါမှာ ဒါတွေဟာ ဆင်ခြင်နိုင်မှုရဲ့ ပြင်ပကို ရောက်နေတာ တွေ့ရတယ်။ ဆိုလိုတာက ခံစားမှုတစ်ခုကို စဉ်းစားပြီး ဖန်တီးလို့ မရသလိုပဲ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ခံစားချက်တစ်ခုကိုလည်း စဉ်းစားတတ်ရုံနဲ့ မဖယ်ရှားနိုင်ဘူး၊ မဖြေရှင်းနိုင်ဘူး ဆိုတာ သိခဲ့ရတယ်။ ဒါနဲ့ပဲ တချို့ကိစ္စတွေမှာ Just feel it !! ဆိုသလိုပဲ စဉ်းစားကြည့် မနေတော့ဘဲ အရင် ခံစားပြီးမှ ဆုံးဖြတ်တယ်။ အဲဒီလိုမှ အချစ်ဆိုတာကို စတွေ့လာရတယ်။ ခံစားတတ်မှ ချစ်တတ်တယ် ဆိုတာကို အဲဒီတော့မှ နားလည်လာတယ်။ အခုအချိန်ထိ ဘာမှ အတိအကျ မသိသေးတော့ ကိုယ် ဖတ်ဖူးတဲ့ စာလေး တစ်ပုဒ်ကို ဘာသာပြန်ပြီး အချစ်ကို အဓိပ္ပါယ်ဖွင့် ပေးလိုက်ပါတယ်။ မူရင်း အင်္ဂလိပ်ဘာသာနဲ့ ဖတ်ချင်တယ် ဆိုရင် ဒီမှာ သွားကြည့်ပါ။ ဒီဘာသာပြန်လေးနဲ့ ကျေနပ်မယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ညီမလေး သဲရေ ကျေနပ်နော်။
Friday, December 07, 2007 | စာညှနျး Love, TAG, ဘာသာပြန်, ရောက်တက်ရာရာ
ဤပို့စ်အား Friday, December 07, 2007 နေ့တွင် ရေးသားထားပြီး Love , TAG , ဘာသာပြန် , ရောက်တက်ရာရာ နာမည်ဖြင့် အညွှန်း သက်မှတ်ထားပါသည်။ ကွန်းမန့်များအား အချိန်နှင့် တပြေးညီ သိလိုလျှင် RSS 2.0 ဖြင့် တောင်းဆို၍ ရယူနိုင်သည်။ လာရင်းနေရာ သို့ ပြန်လည် သွားရောက်နိုင်ပါသည်။